ဆငျးရဲလို့လဲ အခြိနျ နညျးမသှားသလို ခမျြးသာလို့လဲ အခြိနျကိုတှမေရပါဘူး - Tameelay
ကိုယျပိုငျအခြိနျ . . . . တဈရကျမှာ လူတိုငျး ၂၄ နာရီဆိုတဲ့အခြိနျ အပိုငျးအခွားလေးတဈခုပဲ ပိုငျရတာပါ ။
ဆငျးရဲလို့လဲ အခြိနျ နညျးမသှားသလို ခမျြးသာလို့လဲ အခြိနျကိုတှမေရပါဘူး ဒီ ၂၄ နာရီဆိုတဲ့ အခြိနျအတှငျးမှာပဲ ပြျောခွငျး ဝမျးနညျးခွငျး ရုနျးကနျခွငျးလှုပျရှားခွငျးတှနေဲ့ တဈရကျကို ကုနျကွတာခငျြးအတူတူပါပဲ ။
ရုနျးကနျနရေတဲ့လူတှအေတှကျ အခြိနျပိုဆိုတာ မရှိသလောကျရှားပါတယျ အလုပျသှား အလုပျပွနျနဲ့ အိမျရောကျတာ နဲ့ ခေါငျးခရြမယျ့အခြိနျတှေ ရောကျသှားတဲ့ လူတှလေဲ အမြားသားပဲ ရုနျးကနျနရေတာကိုက ဘဝလို့ မွညျတာပဲလေ ။ တခြို့ က ကိုယျ့ဝါသနာမဟုတျတဲ့အရာတှကေို ဝမျးစာအတှကျ လုပျကိုငျနရေတာတှလေဲ ရှိတယျ ။
အားမသနျလို့ မာနျလြှော့ခဲ့ရပါတယျဆိုတဲ့ စကားလုံးတှေ ကို ထားခဲ့လိုကျပါ ။
ပွီးတော့ မဖွဈနိုငျပါဘူးဆိုတဲ့ အရာတှေ ငါ မပြျောဘူးဆိုတဲ့အတှေးတှေ အိမျရှကေ့ အမှိုကျပုံးလေးထဲဖွဈဖွဈ အပွီးတိုငျ လှငျ့ပဈလိုကျတော့ ။
တဈရကျမှာ လူတဈယောကျအတှကျ ကိုယျပိုငျအခြိနျလေး တဈခြိနျ ရှိနဖေို့ လိုအပျတယျ
အဲ့ဒီကိုယျပိုငျအခြိနျလေးမှာ စိတျညဈစရာတှနေဲ့ ဖွတျသနျးခဲ့ရတဲ့လူတှအေတှကျ ပြျောစရာ တဈခုခုကိုရှာပါ ။
အရမျးကို မှနျးကပျြလှနျးပါတယျဆိုတဲ့ လူတှကေ မှီခိုရာ တဈခုခုကို ရှာပါ ။ ဝါသနာကို အစရှာ မရတဲ့လူတှအေတှကျ ဝါသနာတဈခုကို အစပွုပါ ။
ဘ၀ . . . အလုံပိတျထားတဲ့ အရာကွီးမဟုတျဘူး ကိုယျ့သှားခငျြတဲ့လမျးကို ကိုယျကိုယျတိုငျ ရှေးခယျြပွီး လြှောကျရမယျ့လမျးတှေ အမြားကွီးရှိတယျ ။
ကိုယျမလြှောကျခငျြတဲ့လမျးကို ရှေးခယျြစရာမရှိပဲ လြှောကျခဲ့ရတဲ့လမျးတှလေဲ အမြားကွီးပဲလေ ။
အမွငျ့ကိုတကျဖို့ လှကေားထောငျပေးမယျ့လူ မရှိတဲ့အခါ အမွငျ့ကို ရောကျဖို့ ကိုယျကိုယျတိုငျ တဈဆငျ့ခငျြးတကျရမှာပဲလေ ။
ကိုယျပိုငျအခြိနျ တဈခုလေးကို သတျသတျမှတျမှတျလေးထားပါ ။
လူဆိုတာ စကျရုပျမှ မဟုတျပဲ စကျရုပျတဈရုပျဆိုရငျတောငျ အားသှငျးရတဲ့အခြိနျဆိုတာ ရှိသေးတယျလေ လူဆိုတာလဲ ကိုယျ့ဘ၀ ကိုယျ့လမျးကို ဆကျလြှောကျဖို့ ကိုယျ့ကိုကိုယျ အားပေးရတဲ့အခြိနျတှလေဲ လိုတယျ ။
ပငျပနျးနတေဲ့အခါ အေးအေးသကျသာ အနားယူရတဲ့အခြိနျလေးပေါ့ ။
တဈနတေ့ာလုံးရဲ့ ပငျပနျးသမြှ ကိုယျ့စိတျကိုယျ့ကိုယျ မပိုငျခဲ့သမြှ ကိုယျပိုငျအခြိနျဆိုတာ အမြားကွီးလိုအပျတယျ တဈရကျမှာ မဖွဈမနေ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ပြျောအောငျထားနိုငျမယျ့ ကိုယျပိုငျအခြိနျလေးထားပါ ဘာအတှကျကွောငျ့မှ အပကျြစီးမခံနဲ့ စိတျဓာတျတှကေနြတေဲ့အခါ ကိုယျကိုယျတိုငျပဲ အားပွနျတငျးပါ
ဝမျးနညျးနတေဲ့အခါ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျပဲ ပြျောအောငျထားပါ လူတိုငျး ကိုယျပိုငျအခြိနျလေး ပိုငျကွပါစေ ။
ကိုယ်ပိုင်အချိန် . . . . တစ်ရက်မှာ လူတိုင်း ၂၄ နာရီဆိုတဲ့အချိန် အပိုင်းအခြားလေးတစ်ခုပဲ ပိုင်ရတာပါ ။
ဆင်းရဲလို့လဲ အချိန် နည်းမသွားသလို ချမ်းသာလို့လဲ အချိန်ကိုတွေမရပါဘူး ဒီ ၂၄ နာရီဆိုတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာပဲ ပျော်ခြင်း ၀မ်းနည်းခြင်း ရုန်းကန်ခြင်းလှုပ်ရှားခြင်းတွေနဲ့ တစ်ရက်ကို ကုန်ကြတာချင်းအတူတူပါပဲ ။
ရုန်းကန်နေရတဲ့လူတွေအတွက် အချိန်ပိုဆိုတာ မရှိသလောက်ရှားပါတယ် အလုပ်သွား အလုပ်ပြန်နဲ့ အိမ်ရောက်တာ နဲ့ ခေါင်းချရမယ့်အချိန်တွေ ရောက်သွားတဲ့ လူတွေလဲ အများသားပဲ ရုန်းကန်နေရတာကိုက ဘ၀လို့ မြည်တာပဲလေ ။ တချို့ က ကိုယ့်ဝါသနာမဟုတ်တဲ့အရာတွေကို ၀မ်းစာအတွက် လုပ်ကိုင်နေရတာတွေလဲ ရှိတယ် ။
အားမသန်လို့ မာန်လျှော့ခဲ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေ ကို ထားခဲ့လိုက်ပါ ။
ပြီးတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ အရာတွေ ငါ မပျော်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးတွေ အိမ်ရှေ့က အမှိုက်ပုံးလေးထဲဖြစ်ဖြစ် အပြီးတိုင် လွင့်ပစ်လိုက်တော့ ။
တစ်ရက်မှာ လူတစ်ယောက်အတွက် ကိုယ်ပိုင်အချိန်လေး တစ်ချိန် ရှိနေဖို့ လိုအပ်တယ်
အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်အချိန်လေးမှာ စိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့လူတွေအတွက် ပျော်စရာ တစ်ခုခုကိုရှာပါ ။
အရမ်းကို မွန်းကျပ်လွန်းပါတယ်ဆိုတဲ့ လူတွေက မှီခိုရာ တစ်ခုခုကို ရှာပါ ။ ဝါသနာကို အစရှာ မရတဲ့လူတွေအတွက် ဝါသနာတစ်ခုကို အစပြုပါ ။
ဘ၀ . . . အလုံပိတ်ထားတဲ့ အရာကြီးမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်သွားချင်တဲ့လမ်းကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ပြီး လျှောက်ရမယ့်လမ်းတွေ အများကြီးရှိတယ် ။
ကိုယ်မလျှောက်ချင်တဲ့လမ်းကို ရွေးချယ်စရာမရှိပဲ လျှောက်ခဲ့ရတဲ့လမ်းတွေလဲ အများကြီးပဲလေ ။
အမြင့်ကိုတက်ဖို့ လှေကားထောင်ပေးမယ့်လူ မရှိတဲ့အခါ အမြင့်ကို ရောက်ဖို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် တစ်ဆင့်ချင်းတက်ရမှာပဲလေ ။
ကိုယ်ပိုင်အချိန် တစ်ခုလေးကို သတ်သတ်မှတ်မှတ်လေးထားပါ ။
လူဆိုတာ စက်ရုပ်မှ မဟုတ်ပဲ စက်ရုပ်တစ်ရုပ်ဆိုရင်တောင် အားသွင်းရတဲ့အချိန်ဆိုတာ ရှိသေးတယ်လေ လူဆိုတာလဲ ကိုယ့်ဘ၀ ကိုယ့်လမ်းကို ဆက်လျှောက်ဖို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားပေးရတဲ့အချိန်တွေလဲ လိုတယ် ။
ပင်ပန်းနေတဲ့အခါ အေးအေးသက်သာ အနားယူရတဲ့အချိန်လေးပေါ့ ။
တစ်နေ့တာလုံးရဲ့ ပင်ပန်းသမျှ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ့်ကိုယ် မပိုင်ခဲ့သမျှ ကိုယ်ပိုင်အချိန်ဆိုတာ အများကြီးလိုအပ်တယ် တစ်ရက်မှာ မဖြစ်မနေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပျော်အောင်ထားနိုင်မယ့် ကိုယ်ပိုင်အချိန်လေးထားပါ ဘာအတွက်ကြောင့်မှ အပျက်စီးမခံနဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကျနေတဲ့အခါ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ အားပြန်တင်းပါ
၀မ်းနည်းနေတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲ ပျော်အောင်ထားပါ လူတိုင်း ကိုယ်ပိုင်အချိန်လေး ပိုင်ကြပါစေ ။